Monday May 06, 2019 - 08:03:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa sare usii kacaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay duqeymo ay isdgaafsadeen ciidamada Yahuudda sahyuuniyadda iyo xoogaga muqaawamada Filasdiiniyiinta.
Wararka ka imaanaya Qaza ayaa sheegaya in ugu yaraan 24 qof shacab ah ay dhinteen kadib duqeymo aan kala joogsi laheyn oo diyaaradaha Yahuudda ay ka geysteen xaafadaha magaalada hareeraysan ee Qaza, guddiga caafimaadka Filasdiiniyiinta ayaa sheegay in dadka dhintay ay ka mid yihiin dumar iyo carruur halka dhaawacyada guud ay gaarayaan 145 qof.
Duqeynta ugu khasaaraha badan waxay ka dhacday xaafadada Alzeytuuniya iyo Beytu laahiya ee dhacda bariga magaalada Ghaza, sidoo kale ciidamada cirka Yahuudda ayaa burburiyay oo dhulka dhigay ilaa 15 guri oo kuyaal xaafadaha kala duwan ee magaalada Ghaza.
Meelaha yahuudu duqeymaha ku burburiyeen waxaa kamid ah dhismaha wakaaladda wararka u faafisa dowladda dabadhilifka Turkiga, dhismaha oo ka koobnaa dhowr dabay.
Dhinaca kale maamulka Yahuudda ayaa xaqiijiyay in afar qof Yahuud ah ay ku dhinteen dagaalka dib ugasoo cusboonaaday magaalada Ghaza, xoogaga muqaawamada Filasdiin waxay duqeeyeen mandiqadda Biru sabac halkaas oo ay wax ku noqdeen dad Yahuud ah.
Afhayeen u hadlay garabka melleteri ee Ururka xamaas ayaa warbaahinta u sheegay in xoogagoodu ay maanta gantaal nuuca garbaha laga gemo ah laheleen gaari ciidan oo yahuuddu leedahay waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerarkaas
Ismaaciil Haniya oo ah madaxa xafiiska siyaasadda Ururka Xamaas ayaa ku eedeeyay maamulka Yahuudda in ay soo qaadeen weerar cadowtooyo ayna ku qasbanyihiin in ay jawaab celin adag ka bixiyaan duullaanka ciidamada Yahuudda ee magaalada Ghaza.
Warar soo baxay waxay sheegayaan in Xamaas iyo Yahuudda ay gaareen heshiis Xabad joojineed oo ay kasoo shaqeysay dowladda Masar balse illaa iyo hadda dhinacyada wax war ah kamasoo bixin oo ku aaddan xabad joojinta.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Nasaarada Mareykanka oo ka hadlayay duqeymaha Ghaza ayaa xasuuqa Yahuuddu ugeysanayso muslimiinta ku sheegay mid ay isku difaacayso